ngwa ngwa ngwa weebụ
Gị! Mee nnwale na nnweta nnweta maka Ọganihu Gị: -
Mepee weebụsaịtị WebAccessibilityTool.com na ebe nrụọrụ weebụ na-eji ngwá ọrụ a.
Hụ akara ngosi nke Atoall.com "A".
WebAccessibilityTool.com bụ nnukwu weebụsaịtị, ọ bụrụ na ọ tozuo. meghere, wee mepee taabụ ọhụrụ.
Pịa na tab ọhụrụ ppooii.com ma ọ bụ llkkjj.com. Nke a bụ ngwá ọrụ pụrụ iche.
You ga-ahụ WebAccessibilityTool.com ọzọ ma juru gị anya.
Nke a dị mfe iji nhọrọ ị nwere ike iji maka weebụsaịtị gị. Nweta koodu a na Atoall.com ma mado ya na weebụsaịtị gị mgbe ahụ ọ ga-arụ ọrụ.
Gọọmentị kachasị na ebe nrụọrụ weebụ na-eji nke a.
Needkwesịrị Knowmara ya. Aha ngalaba gị niile dị n'asụsụ 1, Na ụwa nke Asụsụ 200.
mụbaa azụmahịa gị, mee nnwale.
Nweta nnweta websaịtị nke Atoall.com na weebụsaịtị gị ugbu a.
Ọ baghị uru na ebe nrụọrụ weebụ gị pere mpe ma ọ bụ buru oke ka Bing, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Yahoo, Baidu, Apple, wdg.
weebụsaịtị Webụbụ Ọchịchị na-enweta uru
Ikwesiri ima uru iri nke ihe eji ama oru ihe puru iche maka uto ndu gi. Mee nnwale.
Nke a ga - eme ka ị 1 nzọ n'ihu n’ihu webụsaịtị iji nweta uto gị.
Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị dị ukwuu na-enweta uru kachasị mma site na teknụzụ ọhụrụ.
Nke a ga - eme ka ị nweta ihe ruru otu ijeri nwere nkwarụ n'ụwa niile maka itolite gị.
Nke a ga - eme ka ị nwee ọbụbụenyi maka mmadụ ruru ijeri mmadụ abụọ na mpaghara mpaghara
Nke a ga - eme ka ọ dịrị gị mfe maka asụsụ 200 mmadụ n'ụwa niile na ndozi gị.
Nke a bụ oge 5 dị mfe pịnye site na ngalaba niile ga-aba uru maka mmadụ niile
Nke a ga - eme ka ị dịrị ọtụtụ nde Muscle Dystrophy nke ụwa ka ito uto
Nke a ga - eme ka ị mepee mobi mobi dị mfe 1, kọmputa, ndị na - ejide ọsọ ọsọ na uto
Nke a ga - eme ka ị nweta ohere maka ndị agadi 1 ijeri ịrị elu
Nke a ga - eme ka oge ị ga - emepere emepe nke ụwa dị n'uwa iji too uto nke azụmahịa.
Kedu ihe kpatara nke a ji dị mkpa maka azụmahịa gị na ego gị?
Nke mbu! must ga-eme nnwale, biko. Nke a bụ ngwa nnweta maka ijeri ndị ọrụ nwere nkwarụ, ngwa ọrụ asụsụ maka ijeri mmadụ mpaghara abụọ, ọ dị mfe ịnweta ọhaneze.
ntuziaka nnweta websaịtị WCGA bụ ihe dị mkpa n'ihi ntuziaka gọọmentị, ikike ụmụ mmadụ, ikike asụsụ, ikike nnweta. Kwụsị anya mmiri nke nkụda mmụọ maka ụgbụ ikuku. Ọ bụ ya mere nrụọrụ weebụ gọọmentị ji eji nke a.
Ndị ọrụ ga-enweta webpage site na enyemaka nke onye ọrụ net ọzọ naanị otu ugboro.
Mgbe nke ahụ gasị, onye ọrụ ịntanetị ọhụrụ nwere ike iji ngwa ọrụ pụrụ iche mepee weebụsaịtị ngwa ngwa site na aka ha ọzọ ọzọ. Ugbu a, ọ nwere ike ịchọgharị otu weebụsaịtị ahụ na-enweghị enyemaka ọ bụla.
Ọ bụrụ bọtịnụ dị n'ahịrị, ihe ndị a dị mfe ịpị, dịka ọmụmaatụ, ppooii.com, llkkjj.com, wdg. na ukwu aka, na ukwu aka, ukwu, mkpisi ukwu nke ukwu, wdg
Ha ga-pịnye akara mmanya ppooii Ctrl + Tinye, saịtị ahụ ga-emeghe ma ọ bụ ooiiuu.com, wdg (bọtịnụ 3 ọ bụla. , site n'aka nri gaa aka ekpe, ugboro abụọ.)
Etu esi eji ngwa nnweta web-Tech iji nweta ihe ịga nke ọma?
Nye m nkeji iri, m ga-enye gị dayamọnd ka ọ ga-aga nke ọma. com na ihe nchọgharị gị.
Detuo ihe ndị pụrụ iche Koodu , họrọ site na nha nha.
Ugbu a tinye koodu ọhụụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na njikwa anụ ahụ ma ọ bụ ntọala. na nzukọ ọgbakọ.
Nnukwu! ọ bụ ya, ugbu a ị nwere ike ị lelee teknụzụ gị na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Mepee weebụsaịtị gị na ihe nchọgharị. > Pịnye na akara mmanya na ngwa ọhụrụ ppooii.com. Obi ga-atọ gị ụtọ. N’ahịrị na ahịrịokwu ahụ dị nfe ma dịkwa mfe iji dee ya.
Ekele! Nnukwu ebe nrụọrụ weebụ gị ga-emeghe na teknụzụ ọhụrụ.
Họrọ Shadị Nleta Gị na Nkwa Gị. Edezila koodu ọ bụla. Tapawa na weebụsaịtị gị maka ndebanye.
Detuo na mado koodu dị n'okpuru na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Nlele 32x32 px
Detuo Koodu Maka Uto
Detuo Koodu Maka Nziputa
Detuo na koodu maka ikike
Nlele 64x64 px
Detuo Na Usoro, Maka Weebụ
Detuo Na Usoro Maka Azụmaahịa
Detuo Koodu Maka Ndi Ahia
Nlele 128x128 px
Detuo Koodu Maka Ndi mmadu
Detuo na Koodu, Dịkwuo Ego
Detuo Koodu Maka Mmepe